I-Walnut Peptide Powder - Ifektri Yomkhiqizi
I-Walnut peptide powder iyi-walnut peptide encane enezinhlobo eziyi-18 zama-amino acid namaminerali ahlukahlukene ngokusebenzisa ikhukhi le-walnut njengezinto ezingavuthiwe kanye nokushisa okuphansi okuyinkimbinkimbi kwe-enzymatic hydrolysis kanye nezinye izigaba eziningi ze-biotechnology.
Ividiyo ye-Walnut Peptide Powder
Imininingwane ye-Walnut Peptide Powder
Igama Product I-Walnut Peptide Powder
Igama leKhemikhali N / A
CAS Inombolo N / A
I-molecular Fi-ormula N / A
I-molecular Weziyisishiyagalombili <1000u
IMisa ye-Monoisotopic N / A
Color Iphuzi eliphuzi noma elinsundu
Sukuhlushwa Tukushisa Gcina ekamelweni lokushisa futhi kufanele ubekwe endaweni epholile futhi eyomile
Aukuphikisana Ukudla, ukudla okunakekelwa okunempilo, ukudla okusebenzayo
Yini i-Walnut Peptide powder?
Isisindo esihlobene samangqamuzana we-walnut peptide powderis esingaphansi kuka-1000u, kanye nenani lamaprotheni i-hydrolyzate angafinyelela ku-90%, okulula ukumuncwa ngumzimba womuntu. Futhi, ine-solubility enhle yamanzi, i-emulsification nomsebenzi we-biological.
Njengamanje, i-millet oligopeptide powder ibisetshenziswa kakhulu emkhakheni wokudla okunakekelwa kwezempilo kanye nokudla okusebenzayo.
Ziyini izinzuzo ze-Walnut Peptide powder?
Millet oligoThuthukisa ikhono lokufunda nokukhumbula
I-Walnut peptide powder ingenza amangqamuzana e-cerebral cortex nerve abe namandla, akhuthaze imetabolism yezicubu zobuchopho, abuyisele ukusebenza kweseli lobuchopho, futhi athuthukise ngempumelelo ukukhuphuka kwengqondo nokukhumbula.
Yehlisa umfutho wegazi
I-Walnut peptide powder ingakhuphula izinga lokuvimbela i-ACE ku-vivo, yehlise ngempumelelo ukukhiqizwa kwe-angiotensin ll, ngaleyo ndlela ifinyelele kumthelela wokwehlisa umfutho wegazi.
Ukuvimbela isifo i-Alzheimer's
I-Walnut peptide powder inezakhiwo ze-neuroprotective kanye ne-antioxidant ezingasusa ngempumelelo ama-radicals wamahhala, zenze ngcono umsebenzi we-enzyme ye-antioxidant, ilawule izici zokuvuvukala. Kuyinto ephephile nebalulekile ukuvikela nokwelapha isifo i-Alzheimer's.
Thuthukisa ukuzivikela komzimba
I-Walnut peptide powder inomphumela oqinile wokulwa namagciwane ongavimbela ngempumelelo inani lamakholoni amabhaktheriya ayingozi futhi ivikele umzimba womuntu kumakholoni ayingozi. Ngasikhathi sinye, i-walnut peptide ingakhulisa ikhono le-phagocytic lamaseli we-phagocytic futhi iqede amaseli we-apoptotic, imfucumfucu yemethambo namaseli wegciwane ayingozi.
I-Experimenta / Ukufundwa Kokukhishwa Kwe-Walnut Ekuthuthukiseni Ukufunda Nokukhumbula Amagundane
I-Enzymatic Hydrolysis yama-Walnut Protein okulungiselela ama-ACE Inhibitory Peptides kanye Nezakhiwo Zawo Ezisebenzayo.
Ucwaningo nge-eftect yokungenelela ye-walnut peptide kumodeli yokuhlola yokuwohloka komqondo okuncane ku-vivo naku-vir.
Umsebenzi we-Antibacterial we-Walnut Hydroly-sate.
I-Yak bone collagen peptide powder
Inkukhu yeGizzard-Membrane Oligopeptide powder
I-Ginseng Oligopeptides powder